Morocco waxay mamnuucday dhammaan duullimaadyadii UK, Jarmalka, iyo Netherlands sababtuna tahay kororka cusub ee COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Moroko News » Morocco waxay mamnuucday dhammaan duullimaadyadii UK, Jarmalka, iyo Netherlands sababtuna tahay kororka cusub ee COVID-19
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Moroko News • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Morocco waxay mamnuucday dhammaan duullimaadyadii UK sababa la xiriira COVID-19 oo ku soo kordhay Britain.
Labadii toddobaad ee la soo dhaafay, Boqortooyada Ingiriiska ayaa soo sheegtay kiisas badan oo COVID-19 ah oo ka badan kuwa Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Spain oo la isku daray.
Morocco waxay mamnuucday duullimaadyadii u socday iyo kuwii ka imaan jiray Boqortooyada Midowday sababta oo ah xaaladda COVID-19 oo sii xumaanaysa ee Great Britain
Diyaaradda British EasyJet ayaa baajisay socdaalkii dibedda ee UK iyo Morocco ilaa 30 -ka November.
Hawlwadeenka fasaxa Ingiriiska ee weyn ee TUI ayaa la shaqeynaya macaamiisha si ay u abaabulaan bixitaankooda Morocco.
Dowladda Morocco ayaa ku dhawaaqday in la joojiyay dhammaan duulimaadyadii tagi jiray ama ka imaan jiray UK, Netherlands, iyo Jarmalka laga bilaabo saqda dhexe ee Arbacada.
Saraakiisha dowladda ee ku sugan Rabat ayaa sheegay in xayiraadda duulimaadyada UK la sameeyay sababo la xiriira tirada aadka u kordheysa ee kiisaska caabuqa COVID-19 ee Great Britain.
Tallaabadan, oo dhaqangeleysa 23: 59GMT Arbacada, ayaa waxaa xaqiijiyey Xafiiska Garoomada Garoomada Qaranka Morocco, oo ka digay inay sii ahaan doonto 'ilaa amar dambe.
Go'aanka dowladda ee lagu mamnuucay socdaalka ayaa saameyn ku yeelan kara qoysaska ku nool England iyo Wales oo qorsheynaya inay u safraan goobta caanka ah ee dalxiiska ee dadka British-ka ah inta lagu jiro fasaxyada nuska ah, oo billaaban doona toddobaadka soo socda.
British side EasyJet, kaas oo duulimaadyo ka sameeya Yurub iyo Morocco, ayaa baajisay safarkii dibedda ee UK iyo Morocco ilaa 30 -ka Nofembar.
EasyJet wuxuu wadahadal kula jiraa dowladda Morocco sidii loo siin lahaa duulimaadyo dib -u -celin ah muwaadiniinta UK ee isku arka inay dibedda ku xayiran yihiin xannibaadaha.
Shirkadda weyn ee fasaxa ee TUI ayaa xaqiijisay inay dowladda Morocco kala hadashay tallaabadan, waxayna sheegtay in shirkaddu ay la shaqeyneyso macaamiisha si ay u abaabulaan ka bixitaankooda waddanka Waqooyiga Afrika.
Go'aanka lagu xaddiday safarka u dhexeeya UK iyo Morocco waxay imaanaysaa iyadoo mas'uuliyiinta Ingiriiska ay diiwaangelinayaan in ka badan 40,000 oo kiis oo cusub oo COVID-19 ah maalin kasta, waddankuna wuxuu soo sheegay dhimashadiisii ​​ugu badnayd ee hal maalin ah ee coronavirus tan iyo bishii Maarso.
Labadii toddobaad ee la soo dhaafay, Boqortooyada Midowday (UK) waxay soo sheegtay kiisas badan oo COVID-19 ah oo ka badan inta Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Spain la isku daray.
Madaxa dallada Ingiriiska ee NHS Confederation, Matthew Taylor, ayaa ka digay in Boqortooyada Midowday ay "ku turunturoonayso xiisadda jiilaalka," iyadoo adeegga caafimaadka ka tagaysa "gees."
Si kastaba ha ahaatee, dowladda UK ayaa diiday baaqyada ku aaddan hirgelinta xannibaadaha COVID-19 sida uu dhigayo COVID 'Plan B', iyadoo meesha ka saaraysa soo jeedin kasta oo ku saabsan xiridda jiilaalka.